Horyaalka Premier League-ga oo la ansixiyay in lagu isticmaalo Video VAR – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaHoryaalka Premier League-ga oo la ansixiyay in lagu isticmaalo Video VAR
Horyaalka Premier League-ga oo la ansixiyay in lagu isticmaalo Video VAR
17/11/2018 B M Arimaha Bulshada, Sports, Wararka, Wararka Soomaalia 0
Hiiraan Xog, Waxaa lagu soo warramayaa in aaladda garsoorka caawisa ee Video Assistant Referee loo isticmaali doono horyaalka Premier League-ga.
Dhammaan kooxaha ka dhisan horyaala Ingiriiska ayaa u codeeyay in xilli ciyaareedka dambe.
Horyaalka Premier League ayaa codsi rasmi ah u gudbin doona International Football Association Board iyo FIFA si loogu ansixiyo isticmaalka aaladda VAR ee xilli ciyaareedka dambe.
“Kooxaha ciyaara Premier League-ga ayaa isku raacay in aaladda Video Assistant Referee (VAR) loo isticmaalo xilli ciyaareedka 2019-20 horyaalka” waxaa sidaas lagu qoray website-ka rasmiga ah ee horyaalka Ingiriiska.
Horraan ayaa aaladda VAR waxaa loogu tijaabiyay isticmaalka aalddan tartamada FA Cup-ka iyo Carabao Cup, waxaana kubadda cagta Ingriiska ay tahay mid aad ay ugu baahanyihiin isticmaalka aaladdan.
Waxaana hadda ay ka war sugayaan fasaxa International Football Association Board iyo FIFA si xilli ciyaareedka dambe ay u isticmaalaan VAR.
Ra’isal Wasaaraha dalka Ingiriiska oo xisbigeedu doonayo in codka kalsoonida loo qaado
Dhallinyaro ka socota Jaamacadda Carabta iyo kuwa Midowga Yurub oo tabaro loo furay